Kedu esi emeputa ngwaahịa gị mgbe mmadụ na-achọ ihe ịchọrọ maka Amazon gị?
Dị ka ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ndị na-adịbeghị anya, 55% nke ngwaahịa ọchụchọ niile na-amalite na Amazon. Amazon ghọrọ ọbụna ihe nchọta nchịkọta na-ewu ewu karịa Google maka nchọpụta ngwaahịa. N'afọ gara aga, usoro mgbasa ozi a na-ewu ewu n'ụwa a karịrị $ 107 na ngụkọta ahịa. Ọ pụtara na ọ na-agbanye ihe karịrị $ 12,000,000 n'ahịa n'oge awa ọ bụla. Í cheghị na ọnụ ọgụgụ ndị a dị mma? Ekwenyere m na nke a na-eme ka obi sie ike na ịkwalite ịzụ ahịa na Amazon.
Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-eche na Amazon ga-agbanye n'ime akụkụ ego ha ma mechie mmekọrịta azụmahịa ha. Ụjọ ndị a abụghị ihe ezi uche na-adịghị na ya, ọ pụkwara ịbụ eziokwu dabere na ụdị azụmahịa gị. Otú ọ dị, ihe ize ndụ a bara uru iburu. Ọchịchị Amazon na-enye ọtụtụ uru ecommerce nke nyere ndị ahịa aka ịba uru. Amazon na-eme ka o kwe omume ịmepụta uru ya maka azụmahịa gị. Ihe niile ị chọrọ bụ ịgbaso iwu nke egwuregwu Amazon.
Atụmatụ iji mee ka visibilụ gị dị na Amazon
Nweta nlezianya ndị ọzọ
Tinye onwe gi n'ebe ndi ahia gi. Mgbe ị na - azụta n'aka Amazon, gịnị ka ị na - achọkarị nke mbụ? N'ezie, nyocha nke ndị ahịa na-adịbeghị anya. Ịkwesiri ijide n'aka na ndị ọzọ nwere afọ ojuju maka ihe ị na-aga ịzụta. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọtụtụ ndị ahịa chọrọ nkwado mmadụ maka ịme mkpebi ha.
Ya mere, ị ga-achọ ohere ị ga-esi nweta nlezianya dị mma maka ndị ahịa gị n'oge a. Ị nwere ike ịhapụ ngwaahịa gị ma ọ bụ nye ndị ahịa ego iji nata nlele anya ziri ezi. A na-ewere akụkọ ndị nwere ihe oyiyi na vidiyo dị ka ndị kasị baa uru nye ndị ahịa gị. Ịkwesịrị ịrịọ maka nyochaa nke ọma ma kwụghachi ndị ahịa azụ-ịzụta maka inye onyinye. Ọ bụkwa ihe ezi uche dị na itinye ego na njikarịcha ederede na ọrụ ndị ahịa iji nweta nyocha ndị ọzọ. N'ikpeazụ, ịkwesịrị ịghọta usoro nhazi ọnụahịa Amazon ma gbanwee ọnụahịa gị. Dị ka ọmụmaatụ, ịnwere ike inye ndị ahịa gị ego ma na-eme ihe ọ bụla kwa ụbọchị iji mee ka ha na-eguzosi ike n'ihe nye ika gị. Usoro ahịa ahia ahụ na oke nyocha na ndepụta kachasị mma nwere ike ịmepụta atụmatụ nyochaa Amazon.
Ọzọkwa, ọ nwere ike ịdị ike ịnweta nyocha na nhazi ndị ọzọ dịka isi mmalite nyocha, blọọgụ dị mkpa, na ọwa ozi mgbasa ozi kachasị amasị.Site n'ịkwalite nyocha gị na ọdụ ndị a, ị ga-enwe mmetụta dị omimi, na-eme ka ị mara nke ọma.
Mepee ndepụta ngwaahịa gị maka Amazon SEO
Nchọpụta njirimara nke Amazon na-arụ ọrụ dị mkpa n'inweta ihe ndepụta gị na-edepụta n'ihu ndị na-ege gị ntị. Amazon nwere ihe dị iche iche dị elu iji chọpụta ụdị ngwaahịa ndị ga-egosi onye ọ bụla dịka ọchịchọ ya na akụkọ ntụrụndụ ọchụchọ ya. Ya mere, ị ga-enyocha isi ihe Amazon kachasị mma ma mepụta ndepụta gị dị ka ha si dị.
A ga-akwụ ụgwọ nlebara anya na aha ngwaahịa gị. Okwesiri inwe ihe omuma ihe di mkpa na nkwekorita gi di elu. Mgbe ahụ, lelee ma ị juputara isi okwu ma ọ bụ na ọ bụghị. Ha kwesịkwara ịgụnye ọchụchọ ọchụchọ gị na n'oge na-adịghị anya ịkọpụta ihe dị mkpa na atụmatụ dị iche iche nke ngwaahịa. Nkọwapụta gị kwesịrị ịba ụba na isiokwu bara ọgaranya. Jide n'aka na ị depụtawo uru niile nke ngwaahịa gị na ngalaba nkọwa.
Lezienụ anya na okwu ọchụchọ ndị ahịa gị nwere ike ịchọta ịchọta ngwaahịa gị, ma lee ihe isiokwu ndị ahịa gị na-ere ahịa n'ahịa. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na iji nyocha ọchụchọ ogologo oge nke ndị ọrụ nwere ike iji chọta ihe ụfọdụ. Usoro ọchụchọ ndị a ga - enye gị ohere dị iche iche iji bulie ọkwa gị na SERP.
Ọ bụ ezie na ọ dị ịrịba ama mgbe niile iji ghọta uru nke ịchọtacha maka ọkwa ọchụchọ, akpa echiche kwesịrị ibute ụzọ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji tinye oge gị na mgbalị gị iji hụ na ị ga-enwe echiche mbụ. Jide n'aka na ndepụta gị nwere foto dị mma na ọdịnaya vidio.
Chọọ ohere maka ịchụpụ ahịa site na Amazon search
Adịghị amachi ohere ịzụ ahịa gị, na-akwalite ngwaahịa gị naanị na Amazon. I kwesiri iche karia. Enwere otutu ohere nkwado na Amazon. Ị na-enweta ngwaahịa gị na pịa, jiri post post ma kwenye na echiche echiche na niche gị. Ọzọkwa, ị nwere ike inwe ọnụnọ dị na forums na blọọgụ, otu mgbasa ozi mgbasa ozi, na ọwa ndị ọzọ.
Isi ihe na-aga n'ihu na Amazon bụ nghọta miri emi nke ahịa ebe ị na-ere. Ya mere, ị kwesịrị ịmara otú ị ga-esi tinye akara gị n'ụzọ ziri ezi na ọchụchọ Amazon iji pụọ n'ìgwè. Mee ihe niile na onye ahịa n'uche, ị ga-ahụkwa ihe. Nye ndị ahịa gị ngwaahịa ndị dị elu na nkwado ndị ahịa kacha mma. Site na ime nke a, ị ga-emeziwanye akụkọ ihe mere eme gị na-adọta ndị ahịa karịa ngwaahịa gị.
Nye ọnụahịa asọmpi na Amazon
Ọ bụrụ na ị bụ onye Amazon, na-akwụ ụgwọ agha ma ị masịrị ya ma ọ bụ. Ọnụ ego asọmpi bụ ihe dị mkpa na Amazon nke na-enyere ndị ahịa aka imeri igbe Buy. Ndị ahịa Amazon kachasị ihe ịga nke ọma jiri ngwá ọrụ pụrụ iche pụrụ iche iji nyochaa ahịa ahịa ma nọrọ asọmpi.
Otú ọ dị, enwerekwa ụzọ ndị ọzọ otu ị ga - esi nọrọ na egwuregwu T-Amazon nke azụmahịa. Ị nwere ike ilekwasị anya na mmapụ gị site n'ịza ozi niile metụtara. Ịkwesịrị ị nweta onwe gị dị ka ezigbo onye na-ere ma nye ndị ahịa gị ihe mere ị ga-eji họrọ gị na ndị na-asọpụrụ gị.
Ọzọkwa, ị kwesịrị ị na-eme ka ego gị na-azụ mgbe nile. N'ụzọ dị otú a, ịkwọ ụgbọala ndị ọzọ ga-enye gị ohere ịzụta ihe ma wedata ụgwọ ị na-akwụ ụgwọ.
Mara na mbubreyo oge na ntanetị nwere ike imetụta àgwà ọma gị ma belata ngwaahịa gị na Amazon. Ọ bụ ya mere ị ga-eji na-elekwasị anya na mbelata ihe ntanetịpụta ahịa dị ka ụgbọ mmiri, nchịkwa mebiri emebi, na ihe ndapụta. Ọ dị mkpa ịnweta ngwaahịa gị mgbe niile n'ihi na ọ na-eje ozi dị ka ihe na-achọpụta maka ịmepụta Buy Buy na ọkwa Amazon dị elu. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbupu ihe gị ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi, Amazon ga-akwụghachi gị ụgwọ ndị bara uru.
Chọọ ndị mmekọ na ohere ọhụrụ na Amazon
E nwere ọtụtụ ohere esi gbasaa ahịa na Amazon. Jide n'aka na ị na-eji ha niile mee ka ọnụma gị nweta ego gị niile. Ị nwere ike ịnwale ịnwekọrịta na ụdị ndị ọzọ na Amazon iji zụlite ike gị ma nweta onyinye achụmnta ego ọhụrụ Source .